Maxkamadda sare ee Ciidamada oo ku raacday xukun ay horay u riday Maxkamadda darajada 1aad. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Maxkamadda sare ee Ciidamada oo ku raacday xukun ay horay u riday Maxkamadda darajada 1aad.
Sabti, October, 20, 2018(HNN) Maxkamadda sare ee Ciidamada qalabka sida ayaa ku raacday xukun ay horay Maxkamadda Darajada koowaad ku riday askar lagu soo eedeeyay inay dil geysteen.
Xukunka askarta lagu riday ayaa laga qaatay racfaan, iyadoo Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ay u fariisatay dhageysiga racfaanka laga qaatay xukunkii ay horay u riday Maxkamadda Darajada 1aad.
Racfaanlayaasha oo kala ah Xasan Geedi Cabdulle iyo Maslax Maxamuud Cali ayaa si wada jir ah loogu soo eedeeyay in ay rasaas ay rideen ay ku dhinteen dad rayid ah oo saarnaa gaari Hoomey ah oo marayay
waddada Bacaacow ee degmada Afgooye, halka Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow uu Baladwayne ku dilay 7/2/2018 Marxuum Xasan Abshir Warsame.
Xasan Geedi Cabdulle iyo Maslax Maxamuud Cali ayaa waxay horay ugu xukuntay Maxkamadda Darajada koowaad ee ciidamada in ay bixiyaan magta Labada marxuum oo ay dileen oo ah laba boqol oo halaad iyo Qarashkii ku baxay dhibanayaal dhaawaca uu ka soo gaaray rasaasta ay fureen, halka C/raxmaan Cumar Cusmaan Yariisow lagu xukumay dil toogasho ah oo ah qisaastii Marxuum Xasan Abshir Warsame 26-ka bishii sideedaad ee sanadkan.
Eedeysane C/raxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa xeer ilaalinta ay sheegeen inuu ka soo baxsaday magaalada Beledweyne, isla markaana uu yimid magaalada Muqdisho, isagoo isku dayay inuu iska qoro dugsiga tababarka booliska ee Jen. Kaahiye, si uu ugu biiro Ciidamada Booliska, waxaana uu bedelay magaciisa, iyadoo Booliska oo xogtiisa gacanta ku hayay ku guuleysteen inay qabtaan, kuna wareejiyay Xafiiska Xeer Ilaalinta.
Dood dheer kaddib markii la dhageystay Qareenasa u doodayay iyo Garsoorayaasha ayaa Guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidanka qalabka Jen Liibaan Cali Yarow waxaa uu ku dhawaaqay inay ku raaceen xukunkii ay horay u riday Maxkamadda darajada koowaad ku raacday.
Maxkamadda sare ee Ciidamada oo ku raacday xukun ay horay u riday Maxkamadda darajada 1aad. added by Ciise Cabdi Ciise on 20/10/2018